Ebe nchekwa Naas - N'ime Kildare
Naanị 35km site na Dublin, Naas ime obodo na-enye gị ohere ịkwụsị nrụgide site na ọrụ obodo dị ka ịnya ịnyịnya, golf na nleta nnukwu ala ochie. Naas dị na nnukwu ọwa mmiri nke narị afọ nke 18, nke mara mma dị ka eserese, na n'ezie, mpaghara a bara ọgaranya na ọdịnala equine nwere ọtụtụ ụzọ ịgba ọsọ na ugbo ugbo.
Naas, bụbu obodo ahịa nwere mgbidi, bụ obodo Kildare. Mpaghara ahụ bara ụba na omenala equine nwere usoro ịgba ọsọ abụọ - Punchestown, ebe obibi nke ịgba ọsọ Irish jump na Naas, nke na-agbakọ ma ịgba ọsọ ewepụghị na ịchụ nta; Goffs Bloodstock Sales na ọtụtụ ugbo stud.
Nwee obi ụtọ njem ntụrụndụ n'akụkụ Grand Canal yana njegharị ndị na-apụ na Sallins, na-atọ ụtọ ụtọ nke ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe a na-eri nri na mpaghara ahụ ma ọ bụ maka ndị na-anụ ọkụ n'obi moto, nweta ihe niile Mondello nwere inye.